Me-Commerce uye Ramangwana Rekutengesa | Martech Zone
Retail iri kuchinja nekukurumidza - zvese zviri pamhepo uye pasiri pamhepo. Pachivanhu, nzvimbo dzekutengesa dzagara dziine yakaderera purofiti margins uye yakakwira vhoriyamu kuburitsa bhizinesi mhedzisiro yavaida kuti vararame. Tiri kuona kukurumidza kutendeuka muzvitoro mazuva ano uko tekinoroji iri kuwedzera kukura uye kuwedzera kushanda. Nzvimbo dzekutengesa dzisiri kutora mukana dziri kufa… asi vatengesi vari kushandisa tekinoroji varidzi vemusika.
Demographic shifts, iyo tech shanduko, uye yevatengi kudiwa kune yakasarudzika sevhisi sevhisi iri kuchinja iyo nzira yemugwagwa kune yevatengi sarudzo rwendo.
McKinsey paKushambadzira anoteya zvavanotenda kuti zvitsva Ina P dzeKushambadzira:
Kupararira - vanhu vanotenga chero kwavanenge vari - kungave kuri pamubhedha nepiritsi kana ivo vari pakati peimba yako yekuratidzira.
Kubatanidzwa - vanhu vari kuzogadzira uye vagovana ratings uye ongororo pamhepo emakambani, zvigadzirwa nemasevhisi.
munhu zvichienderana - batch uye blast yechinyakare kushambadzira haichashandi. Kubatana kwepamoyo kuburikidza nenyaya dzakafanana kutyaira shanduko.
Kunyorerwa - nharembozha, kutsvagisa pamhepo uye maturusi maturusi ari kubatsira vatengi kutora kutonga kwavo kuburikidza nemaitiro avo.
Tags: komesiecommerceMcKinseyMcKinsey & Kambanime-commerceonline shoppingkutora chikamumunhu zvichienderanazvinowanikwakunyorerwachitorochitoro tekinorojikunotenga
Iyo Inonyanya Kutsvakwa Wearable Technologies
BuzzSumo: Tsvagiridzo yepamusoro Zvemukati neChinyorwa, Domain, kana Munyori